အားလုံးချစ်တဲ့ သရဲကာတွန်းကားလေး Hotel Transylvania3Trailer ထွက်ပြီ ! – Trend.com.mm
Posted on March 22, 2018 March 22, 2018 by Wint
အားလုံးသိကြတဲ့ ဒီကာတွန်းလေးဟာ ပထမတစ်ခေါက်ထွက်တုန်းက တော်တော်လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့ သရဲမလေးနဲ့ လူသားကောင်လေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ၊ ဒုတိယပိုင်းကတော့ သူတို့နှစ်ဦးမွေးဖွားလာတဲ့ သားလေးကို သရဲတစ်ယောက်ရဲ့အရည်ချင်းတွေတက်မြောက်အောင် အဘိုးဖြစ်သူက သင်ပေးတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး ထွက်ရှိတဲ့ Hotel Transylvania 3: Summer Vacation ကတော့ နွေရာသီအပန်းဖြေခရီးထွက်ကြပုံကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ရသမျိုးစုံ ခံစားနိုင်အောင် ဒါရိုက်တာ Genndy Tartakovsky ၊ ဇာတ်ညွန်း Michael McCullers တို့က ဖန်တီးထားပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်နေ့ဆို အမေရိကန်မှာထွက်ရှိတော့မှာပါ။ ဇာတ်လမ်း နမူနာဗီဒီယိုလေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးခဈြတဲ့ သရဲကာတှနျးကားလေး Hotel Transylvania3Trailer ထှကျပွီ !
အားလုံးသိကွတဲ့ ဒီကာတှနျးလေးဟာ ပထမတဈခေါကျထှကျတုနျးက တျောတျောလူကွိုကျမြားခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာတော့ သရဲမလေးနဲ့ လူသားကောငျလေးရဲ့ အခဈြဇာတျလမျး ၊ ဒုတိယပိုငျးကတော့ သူတို့နှဈဦးမှေးဖှားလာတဲ့ သားလေးကို သရဲတဈယောကျရဲ့အရညျခငျြးတှတေကျမွောကျအောငျ အဘိုးဖွဈသူက သငျပေးတဲ့ဇာတျလမျးမြိုးဖွဈပါတယျ။
အခုနောကျဆုံး ထှကျရှိတဲ့ Hotel Transylvania 3: Summer Vacation ကတော့ နှရောသီအပနျးဖွခေရီးထှကျကွပုံကို ပြျောရှငျကွညျနူးစရာ ရသမြိုးစုံ ခံစားနိုငျအောငျ ဒါရိုကျတာ Genndy Tartakovsky ၊ ဇာတျညှနျး Michael McCullers တို့က ဖနျတီးထားပါတယျ။ ၂ဝ၁၈ ဇူလိုငျလ (၁၃)ရကျနဆေို့ အမရေိကနျမှာထှကျရှိတော့မှာပါ။ ဇာတျလမျး နမူနာဗီဒီယိုလေး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို ဆံကေသာတွေလှပသန်စွမ်းစေဖို့ သင်္ဘောသီးနဲ့ပေါင်းတင်ကြမယ်